နေအိမ် / အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများအဘို့အမော်ကွန်း
17/01/2018 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အနုညာတစီရင်အဖွဲ့အစည်းများခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှု၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သေးငယ်တဲ့ပြောဆိုချက်ကိုခုံသမာဓိပိုမိုသင့်လျော်သောဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏ခုံသမာဓိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြ. အဆိုပါ ICC ကအနုညာတစီရင်၏အဖြစ်သက်ဆိုင်သောအုပ်စိုး 1 မတ်လ 2017 အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုအောက်တွင်တောင်းဆိုမှုများများအတွက်အထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမိတ်ဆက်ဖွငျ့ဤလမ်းကြောင်းသစ်ကိုအတည်ပြု2သန်း. ICC ကိုတရားရုံး၏အဆိုအရ, […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ICC ကအနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ
10/01/2018 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
၏နှစျတှငျ 1437 H ကို (2016), ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အနုညာတစီရင်များအတွက်ဆော်ဒီရေးစင်တာ (“SCCA”) အဆိုပါ UNCITRAL အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများအပေါ်အခြေခံပြီးရေးဆွဲခုံသမာဓိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို. ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများများအတွက်ဆော်ဒီရေးစင်တာကဒီမှာရရှိနိုင်ပါသည်. ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အနုညာတစီရင်များအတွက်ဆော်ဒီရေးစင်တာမှတဆင့်ခုံသမာဓိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရာရှိတဦးကဆော်ဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူညီကြောင်းသေချာစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. ခုံဖှဲ့။ စီရငျဆုံးဖွတျခွငျး […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, ဆော်ဒီအာရေဗျအနုညာတစီရင်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်၏ကုန်ကျစရိတ်: UNCITRAL, ICSID တရားစွဲဆိုထားနှင့်တတိယပါတီရန်ပုံငွေရှာခြင်း
27/12/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ကမ္တာ့အနုညာတစီရင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်မကြာသေးမီကဆောင်းပါးမှာတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်ထဲမှာပါတီကုန်ကျစရိတ်များ, ဒုတိယစာစောင်မကြာသေးခင်ကပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှု၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိ၏ကုန်ကျစရိတ်သေးပြန်မြင့်တက်ကံမကောင်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ. မှစ. 2013, ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပါတီကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားအမေရိကန်ဒေါ်လာခဲ့ကြသည် 7.41 ယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအဘို့သန်း 5.19 ဖြေဆိုသူများအတွက်သန်း. ထို့နောက်ခင်မှာ, ကုန်ကျစရိတ်များ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ICSID အနုညာတစီရင်, UNCITRAL အနုညာတစီရင်
Puerto Rico အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအနုညာတစီရင်
04/12/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
Puerto Rico အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိအတွက်ခေတ်မီခဲ့သည် 2012, Puerto Rico နောက်ဆုံးတော့ကုမ္ပဏီများနှင့်ခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုနေရာဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူ၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအနုညာတစီရင်ဥပဒေပြင်ဆင်ထို့ကြောင့်၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာအများဆုံးလုပ်သည့်အခါ. 1950 ရဲ့အထံမှရက်စွဲပါအရာယခင်ခုံသမာဓိဥပဒအဆင်ပြေအောင်မခံခဲ့ရ […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ
08/11/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံ (ထို့အပြင်ထိုအရပ်ကိုသို့မဟုတ်ဒေသအဖြစ်လူသိများ) စာချုပ်နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိဝါကျရေးဆွဲတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်မကြာခဏခုံသမာဓိ၏နေရာနှင့်အတူရောထွေးနေသည်, တူညီတဲ့အရာအရာမဟုတ်ပါဘူး. ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံ၏ရှေးခယျြမှုရှိနိုင်ပါသည် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ICC ကအနုညာတစီရင်, ဆွစ်ဇာလန်အနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်